Izintshisakalo ze-imeyili ezithakazelisayo > UVielhuber David
Izintshisakalo ze-imeyili ezithakazelisayo09
Ngabe kufanele amagama wesizinda namakheli e-imeyili ahlale engonobumba abancane ukuqinisekisa ukuthi ufika lapho ufuna ukuya khona? Noma ingabe lokhu akusebenzi ngokuphelele? Amaseva weposi we-Google, ngokwesibonelo, anezilungiselelo ezingajwayelekile ezinemiphumela ethokozisayo, engizoyethula kafushane esihlokweni esilandelayo.
IGoogle, esanda kuqala ukunikela ngamakheli okuthi @ gmail.com kubasebenzisi baseGerman, izishaya indiva izikhathi eziphambi kwabakaki futhi isipelingi asizweli. Ngakho-ke amakheli e-imeyili alandelayo alingana ngokuphelele:
Izinga le- RFC 2821 licacisa ukuthi lokhu kufanele kuphathwe kanjani ngokujwayelekile:
Lokhu kusho ukuthi igama lesizinda ngemuva kwenkawu yobakaki alinazwelo futhi ingxenye yendawo ngaphambi kokuba inkawu yobakaki ibucayi. Ezimweni eziningi kakhulu, noma kunjalo, amaseva weposi ayabekezelela kakhulu. Ngincoma ukuthi uhlale ubhala womabili amakheli e-imeyili namagama wesizinda ngamacala amancane.
Okuncane eceleni: Ungangeza nekheli elengeziwe ngqo phambi kwe- @, elizoshaywa indiva ngesikhathi sokulethwa (futhi-ke lingasetshenziswa, ngokwesibonelo, ukuhlunga okususelwa kumthetho kwama-imeyili):